हाम्रो घरको सुरी !- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
हाम्रो घरको सुरी !
काठमाडौँ — खुट्टा उचालेर चढ्छ धुरी धुरीहेर बाबु हेर, हाम्रो घरको सुरी !
ठ्याक्कै बाघका जस्ता लगाएर लुगा
सातो लिन खोज्छ ठड्याएर जुँगा
जिउ मर्काएर गर्छ चुरीफुरी
हेर नानी हेर, हाम्रो घरको सुरी!
मुसा खाने दाउमा भाँडारतिर ढुक्छ
कुकुर देख्नै हुन्न कुना खोज्दै लुक्छ
डरै नमानेर हेर्छ घुरी घुरी
हेर भाइ हेर, हाम्रो घरको सुरी!
बसी बसी खाने लोभी, अल्छी, लाछी
कराई चाट्न खोज्ने यै हो दूधको साक्षी
लाजै पचाएर बस्छ भान्सा कुरी
हेर बैनी हेर, हाम्रो घरको सुरी!
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ १०:२५